You searched for ZIMBABWE - Page 3 of 94 - Miningreview.com
[img:Diamonds%20-%20Pic%201%20%282%29_0.jpg|Groups of miners at
fields in Zimbabwe]Harare, Zimbabwe --- MININGREVIEW.COM --- 28 May 2010 - The government of Zimbabwe has banned all diamond exports, including those from a Rio Tinto unit, until gemstones from its controversial Marange fields have been certified by industry regulators.
â€’ could reach 40
next three years]Harare, Zimbabwe --- MININGREVIEW.COM --- 01 September 2010 - Zimbabwe's diamond output from its Marange fields is expected to reach 40 million carats in the next three years, with annual government revenues calculated at around US$2 billion (R15 billion).
Zimbabwe mining sector could attract US$16 billion
[img:Zimbabwe%20-%20Pic%201_0.jpg|The Mimosa mine –
one of Impala Platinum’s
operations in Zimbabwe]Harare, Zimbabwe --- MININGREVIEW.COM --- 01 June 2009 - Zimbabwe prime minister Morgan Tsvangirai says the southern African country could attract up to US$16 billion (R145 billion) in exploration and mining investment if it corrects policies that have scared away foreign investors.
(Johannesburg 9 May 2018) Mr. Munesu Munodawafa, Permanent Secretary, Ministry of Mines and Mine Development Zimbabwe will present the keynote address at the Zimbabwe...
â€’ 2 million carats
this year]Harare, Zimbabwe --- MININGREVIEW.COM --- 04 March 2010 - Zimbabwe has produced 2 million carats of diamonds so far this year from its controversial Marange fields, a government official revealed after the arrival of an international monitor to review the mining operations.
Rights groups â€’ which accuse Zimbabwe's security forces of widespread atrocities in a bid to stop thousands of illegal miners on the poorly secured fields in the eastern part of the country â€’ have been pushing for a ban on Zimbabwean diamonds.
Unki platinum mine dilemma
Anglo American]London, England --- MININGREVIEW.COM --- 27 June 2008 - Anglo American plc – one of the world's largest mining and natural resource groups – says the government of Zimbabwe has threatened in very clear terms to assume control of the Unki platinum mine in central Zimbabwe if it deems such action necessary.
Zimbabwe government criticised for secretive mining deals
[img:Deals%20rad_0.jpg|The Kanyemba area
in Zimbabwe, where
alleged to have struck
up an unconfirmed deal
with a Chinese firm to
mine uranium]Harare, Zimbabwe --- 20 May 2013 - The government of Zimbabwe is facing criticism for a number of what is being referred to as ‘secretive mining deals being made without any consultation with communities and other stakeholders.
Date: 1 - 2 August 2019 Location: Kingdom Hotel, Victoria Falls, Zimbabwe Meet over 300 high-level decision making delegate attending the Zimbabwe Mining Investment Conference 2019 on...